Safiiradda Soomaaliya iyo mareykanka ee dalka Uganda oo ka wada hadlay xaaladaha ammaan iyo siyaasad ee dalka Soomaaliya. | Radio Muqdisho
Safiiradda Soomaaliya iyo mareykanka ee dalka Uganda oo ka wada hadlay xaaladaha ammaan iyo siyaasad ee dalka Soomaaliya.
Published on December 7, 2012 by admin · No Comments · 2,212 views
Kadib kulan casuumaad ah oo ay safaarada Soomaaliya u fidisay maanta safiirka mareykanka ee Uganda ayeey kaga wada hadleen labadda safiir ee Soomaaliya iyo Mareykanka xaaladaha ammaan iyo siyaasad ee dalka Soomaaliya.
Kulanka ay wada qaateen safiirada Soomaaliya iyo Mareykanka ee wadanka Uganda ayaa waxaa ku wehliyay qunsulka Soomaaliya ee Uganda iyo diblumaasiyiinta Safaarada,waxaana inta uu socday kulankaasi la iskula soo qaaday sidii dowlada Mareykanka ay u hormarin leheyd isla markaana gacan ay uga geysan leheyd adkeynta ammaanka iyo sidoo kale gacan siinta ciidamad Qalabka sida si loo hanto ammaanka dalka Soomaaliya inta ka hartay .
Ambassador Soctt.H Delisi safiirka Mareykanka ee dalka Uganda oo la hadlayay warbaahinta ayaa tilmaamay in xaalada ammaan ee dalka Soomaaliya uu yahay mid soo hagaagayay isla markaana wadanka Soomaaliya uu cagaha saaray dhabihii dimuquraadiyada.
Safiirka Mareykanka ee Dalka Uganda Soctt.H Delisi Sidoo kale waxaa uu balan qaaday in dowladiisa ay gacan weyn ka geysan doonto qalabeynta iyo gacn siinta ciidamad Booliiska Soomaaliyeed.